Inona no atao hoe media sosialy? Nahoana ny orinasa no tokony hikarakara?
Betsaka ny resaka momba ny fiatraikany na ny tsy fisian'ny fiatraikan'ny haino aman-jery sosialy amin'ny orinasa B2C sy B2B. Ny ankabeazany dia atao ambanin-javatra noho ny fahasarotana amin'ny fiantsoana azy Analytics, saingy tsy misy isalasalana fa mampiasa tambajotra sosialy ny olona mba hikarohana sy hahitana serivisy sy vahaolana. Aza mino ahy? Tsidiho ny Facebook dieny izao ary zahao ireo olona mangataka tolo-kevitra ara-tsosialy. Mahita azy ireo isan'andro aho. Raha ny tena izy, ny mpanjifa dia 71% azo inoana kokoa fa hanao fividianana mifototra amin'ny fampahalalana momba ny media sosialy.
Miaraka amin'ny fahamatoran'ny media sosialy amin'ny asa aman-draharaha tato anatin'ny taona vitsivitsy, maro ny fikambanana B2B no mahatsapa ny tena sanda azo omena azy. Na mampiasa media sosialy ianao hanampiana hivarotra vokatra mivantana na hampiasana azy ho toy ny singa iray amin'ny laharam-pahamehanao, ny fanaovana fomba efa voarindra izay mampiditra tanteraka ny haino aman-jery sosialy amin'ny tetikadinao ara-barotra amin'ny ankapobeny dia hanome anao ny fotoana tsara indrindra hamoronana orinasa vaovao. Stephen Tamlin, sampana any Eropa
Inona avy ireo paikady media sosialy 4 tokony hampiharina amin'ny orinasanao?
mihaino - Ny fanaraha-maso ny haino aman-jery sosialy hamaly ny vinavina sy ny mpanjifa an-tserasera dia fomba iray mampino hamorona fifandraisana matoky azy ireo. Tsy tokony hoferana ho azy ireo miresaka mivantana aminao ihany koa izany. Tokony hihaino izay voalaza momba ny anaran'ny mpiasanao, ny marikao ary ny anaran'ny vokatrao ianao. Io dia hahafahanao mamaly ny fanontaniana mifandraika amin'ny varotra, hiaro ny lazanao an-tserasera ary hampiorina ny fahatokisanao amin'ny vinavinanao sy ny mpanjifanao fa ianao dia karazana orinasa samy mikarakara sy mihaino. 36% amin'ireo mpivarotra no nahazo mpanjifa tamin'ny #Twitter
fianarana - 52% ny tompona orinasa nahita ny mpanjifany tao amin'ny #Facebook ary 43% ny tompona orinasa nahita ny mpanjifany tao amin'ny #LinkedIn. Amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ireo vondrom-piarahamonina ireo dia azonao atao ny mihaino ireo mpitarika ny indostria, ireo mpanjifa ho avy ary ireo mpanjifanao manokana miresaka momba ny olana lehibe eo amin'ny indostriao. Hanampy ny orinasanao amin'ny famolavolana paikady maharitra hifaninana amin'ireo indostria ireo.
manao - Raha tsy miresaka afa-tsy rehefa miresaka ianao, na rehefa misy ny varotra, dia tsy mahazo mijery ny haino aman-jery sosialy momba ny karazana orinasa manao ahoana ianao. Ny famoahana atiny sy fizarana lahatsoratra mahaliana ny vinavinanao sy ny mpanjifanao dia hanampy amin'ny fananganana fifampitokisana sy fahefana amin'izy ireo. Ny fanampiana ny mpanjifanao hahomby dia hiantoka ny fahombiazanao, tsy ny azy ihany!
fampiroboroboana - Ny fampitomboana ny tratranao, ny tamba-jotra ary ny fampiroboroboana ny vokatrao sy ny serivisinao dia tsy maintsy atao ao anatin'ny paikady media sosialy voalanjalanja. Tsy te hampiroborobo ny tenanao foana ianao, fa tokony tsy hanala ireo fotoana ireo amin'ny Internet. Maherin'ny 40% ny mpivarotra nanakatona fifanarahana roa ka hatramin'ny dimy noho ny Social Media
Tags: Antontan'isa momba ny asa sosialy 2015haino aman-jery sosialyfanapahan-kevitra mividygoogle plus ho an'ny orinasagoogle + ho an'ny orinasany fomba hanampian'ny media sosialy ny orinasanaony fomba hanampian'ny media sosialy ny orinasalinkin ho an'ny orinasamikatona ny varotraolona mpivarotrahaino aman-jery sosialy ho an'ny orinasafitaomana media sosialyvarotra sosialyfivarotana ara-tsosialytwitter ho an'ny orinasa
Ahoana no anoloran'ny poketra finday ny varotra
Dec 1, 2015 amin'ny 12: 09 AM
Lahatsoratra mahafinaritra Douglas! Ireo toro-hevitra nomenao ireo dia tsy maintsy ampiharina rehefa manao dokam-barotra amin'ny Internet ny orinasanao. Tsy ampy ny fandefasana hafatra. Zava-dehibe ny fihainoana ny mpihaino anao sy ny fiarahana amin’izy ireo mba hahafantaranao izay mahaliana azy. Raha fantatrao ny fahalianan'izy ireo dia ho azonao fantarina ny mpanjifa lasibatrao. Ny ankamaroan'ny mpivarotra dia manana orinasa mahomby noho ny mpanjifa hitany tamin'ny alàlan'ny media sosialy. Misaotra anao tamin'ity lahatsoratra ity!
Dec 17, 2015 amin'ny 1: 37 AM
Azo antoka fa hahatanteraka ireo zavatra ireo. Ny tiako holazaina dia nampiasa ny media sosialy ho ampahany amin'ny fampielezan-kevitra ara-barotra nataoko aho ary miaraka amin'ny paikady mety amin'izany, hatreto, dia tena tsara ho an'ny orinasa izany. Saingy tsy mametra ny tenako aho fa ity lahatsoratrao ity dia afaka manampy ahy be dia be hanatsara kokoa amin'ity karazana paikady ity.